Ny Kildare Maze - IntoKildare
Ankafizo ny fitsinjaram-pianakaviana sarotra sy manaitaitra miaraka amin'ny fialamboly taloha amin'ny vidiny mirary. Avy amin'ny rivotra madio, ny maze fefy lehibe indrindra an'i Leinster dia toerana mahafinaritra ahafahan'ny fianakaviana mifaly isan'andro.
Ny fanambinao ao amin'ny Hedge Maze dia ny mitady ny lalanao mina 1.5 hektara voaravaka lalana mankany amin'ny tilikambo fijerena afovoan'ny maze. Ho very ianao, misy lalana 2km mahery ary azo antoka fa hahafinaritra anao ny mahita ny lalanao. Manomboka amin'ny tilikambo fijerena mankafy ny fomba fijery panoramic hatrany ambanivohitra sy ny manodidina na mankafy fotsiny ny fomba fijery ny maze mampiseho ny fisian'izy io. St. Brigid, ny olo-masina mpiaro an'i Kildare no aingam-panahy tamin'ny famolavolana, izay misy ny hazo fijalian'i St. Brigid izay hita ao anatin'ny quadrants efatra, ny afovoan'ny lakroa no ivon'ny maze.
Ny Wood Maze dia fanamby mampihetsi-po ary ovaina matetika ny lalana mba hitazomana ny rantsan-tongotrao!
Ao koa ny Adventure Trail, Zip Wire, Crazy Golf ary ho an'ireo mpitsidika tanora kokoa, faritra filalaovan-jaza. Misy tsakitsaky sy tsakitsaky an-tsakafo ao amin'ny magazay eny an-toerana.
Ilaina ny famandrihana an-tserasera
Adventure sy hetsika, Outdoors, Fianakaviana ankohonany, Vatosoa miafina, Clane
County Kildare, Irlandy.
Misokatra ny faran'ny herinandro amin'ny Mey sy Septambra
7 Andro Jona, Jolay & Aogositra
Session 10 am-1 hariva na Fivoriana 2 pm-6 hariva
Azo ovaina, tsidiho azafady www.kildaremaze.com raha mila fanazavana fanampiny